बाढीले वितण्डा मच्चाईरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कदम चालेपछि चौतर्फी वाही वाही ! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > बाढीले वितण्डा मच्चाईरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कदम चालेपछि चौतर्फी वाही वाही !
बाढीले वितण्डा मच्चाईरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कदम चालेपछि चौतर्फी वाही वाही !
भारतसँगको समन्वयमा सर्लाहीस्थित मलंगवा–भारत सीमामा पानीको बहाव खुलाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग समन्वय गरि पानीको बहाव खुलाइएको हो । सीमा क्षेत्रमा पानीको बहाव थुनिएपछि शुक्रबार बिहानैदेखि मलंगवा बजारका केही ठाउँ डुबान परेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ट्वीट गर्दै बाढी, पहिरो गएका क्षेत्रमा उद्धारका लागि तदारुकताका साथ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको बताएका छन्।
सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले पनि मलंगवा नगरपालिकाको गोरखकाली भन्ने ठाउँमा थुनिएको पानीको बहावलाई खुलाइएको जानकारी दिए । बागमती नदीका विभिन्न ठाउँमा बाँध फुटेर बस्ती जोखिममा परेको प्रजिअ राउतले बताए । प्रधानमन्त्रीको यो कदपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा भईरहेको छ ।
०७६ असार २८,शनिबार,इ.स. २०१९ जुलाई १३ तारिख, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य!
यी बालिका जस्ले पुलिसमा जागिरे बाबुको रक्षाका लागि दिएकि यस्तो मर्मस्पर्शी सन्देश, जसले तान्यो विश्वको ध्यान
भेटिएकि बच्चीकि पाल्ने आमा ‘मलाई जेल हाल्छन्’ भन्दै आईन्। किन यस्तो भयो (भिडियो हेर्नुस)